White lace uwe
Mkpịsị ụkwụ bụ ihe nnọchianya nke nwanyị, ịdị nro na nhichapụ. Ọ bụ ya mere ejiji ndị na-emeghe na-enweta nnukwu ewu ewu n'etiti ụmụ nwanyị. Ihe ndị a na-agụnye uwe ejiji na agba ọ bụla, ma karịsịa uwe ejiji na-acha ọcha na-acha ọcha.
White uwe nke lace n'ike mmụọ nsọ ama ndị na-emepụta ịmepụta ụdị mbụ. Erdem na Anna Sui na-agwa ndị inyom ka ha na-ejide uwe ogologo ikpere. Ndị na-emepụta ihe na-eme ka a na-emesi ike n'úkwù, na-ejiri eriri silk dị mkpa na-emesi ya ike. Ndị na-eme ihe ochie na-ekwu Valentino na Stella McCartney, bụ ndị na-enye aka iji chọpụta ụdị mgbanwe nke translucent na eriri mkpa. Vivienne Westwood kere akwa ejiji na-acha ọcha lace, mere ndokwa dị iche na kọfị na mmiri ara ehi. E lere anya nke ọma na uwe ejiji na-acha ọcha nke e nyere na nchịkọta Givenchy, Jill Stuart, Balenciaga, Burberry na Chanel. A na-eji obere uwe na-acha ọcha na-eji akwụkwọ ndị dị mgbagwoju anya, obere ihe ndị dị na V na obere uwe aka.
Kedu uwe ị ga-ahọrọ?
Site n'enyemaka uwe ejiji na-acha ọcha, ị nwere ike ịmepụta ihe dị nro nke ga-eme ka ị ghọọ dike heroine. Otú ọ dị, ịkwesịrị ịkwado koodu ejiji nke ihe omume ahụ, ka ọ bụrụ na ọ ga-adabara na ọnọdụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Enwere uwe dị iche iche na-acha ọcha ga-adị mma n'ọnọdụ ụfọdụ.
White lace uwe na ala. Ọtụtụ mgbe, a na-ahụ uwe a na nwunye ma ọ bụ ihe omume ọha na eze. Uwe ogologo ga-adọta uche, n'ihi ya, ị ga-achọ ịme ntutu gị, etemeete na ejiji akwa zuru okè. E kwesịkwara icheta na agba ọcha na-acha, n'ihi ya, ụmụ agbọghọ ndị na-atọ ụtọ ga-agbachitere ụdị ejiji kwesịrị ekwesị.
Ejiri akwa ejiji akwa. Na-ele anya ntorobịa na nke oge a. Ndị na-eme ihe nkiri na-ejikọta ha na chaa, blazers, jetet na ọbụna cardigans. Iji zere ibubiga ihe oyiyi ahụ, zere ihe ndị na-egbukepụ egbuke egbuke na nnukwu akpa.
Nwee uwe mgbede ejiji akwa. O doro anya na ọ ga-ekenye onye nwe ya n'aka ìgwè mmadụ ahụ. Uwe mkpuchi nwere ike ijikọta ya na ụfụ, ụta, mmapụ na ihe dị mgbagwoju anya. A na-ejikọta akwa uwe mgbede na- acha uhie uhie na akwa ụkwụ , nnukwu akpa akwa na akwa odo odo.
Winter outerwear maka ụmụ nwanyị
Jụọ uwe na-agbanye
Uwe eji ezumike maka ndị inyom zuru oke
Uwe ejiji maka nwanyi di ime
Nwa akpa nwanyi
Kedu aha aha Timur
Victoria Beckham ịke - ihe nzuzo nke ejiji oyiyi
Egwuregwu 2017 - ejiji ejiji, ọnọdụ na ọnọdụ
Gịnị ga-esi na Jerusalem pụta?
Taylor Swift gosipụtara ọhụụ ọhụrụ na-atọ ụtọ
Dahlias - iche
Parrots maka idebe ụlọ
Karịa mmanụ aṅụ si dandelions bara uru?
Ogologo oge ndi nwanyi
Ihe àmà doro anya na ị bụ onye na-emeghe
Agbado uwe elu ala
Mmebi obi ojoo - ihe mere ha ji ebili, ihe dị ize ndụ na gịnị ka a ga-eme?
Ogologo oge ole ka ọ ga-adịru maka nwamba?
Macaulay Kalkin kwuru eziokwu banyere oge siri ike nwata na mmekọrịta ya na nna ya
Clafuti na Peaches
Kedu ka esi tufuo ijiji n'otu ụlọ?